picturesque ကမ်းခြေ, ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ရေနှင့်သမိုင်းတစ်နည်းနည်းကပ္ပလီဟာတစ်ဦးကို တင်. -ကျောအဘို့ပြီးပြည့်စုံသောရှေးခယျြမှု, ပျော်စရာအားလပ်ရက်, ရှည်လျားသောခြေကျင်တောင်တက်ခရီးကြမ်းနှင့်တကွ, ကျွန်းဓားမနောက်လာ lazing နှင့်ပိုစွန့်စား, နက်ရှိုင်းသောပင်လယ်ရေငုပ်များအတွက်ပါစေ။ ဆိပ်ကမ်း Blair ၏ယဉ်ကျေးမှုမြို့ မှစ. နီးလ်နှင့် Havelock ကျွန်းများ၏ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့အဖြူရောင်ကမ်းခြေနှင့် Diglipur ၏ထုံးကျောက်ဂူရန်, ကပ္ပလီတိုင်းခရီးသွားဧည့်များအတွက်တစ်ခုခုကိုဆက်ကပ်။ ဒါဟာညာဘက်အပူပိုင်းပရဒိသုရုပ်ရှင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ခရီးသွားမဂ္ဂဇင်းအဖုံးထဲကနေသောအာရှအတွက်အလှဆုံးကမ်းခြေအချို့ရှိပါတယ်။ ကျွန်းများဤအုပ်စုတွင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အများဆုံးဝေးလံသောအစက်အပြောက်များတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ ဤခရီးစဉ်သင်တို့သည်ဤကမ်းခြေသို့စူးစမ်း & တစ်ဦးလျှော့ပေါ့ laidback အားလပ်ရက်ရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုငါပေးမည်။
05 Nights / 06 ရက်ပေါင်း | tour Code ကို: 030
Port Blair လေဆိပ်မှာဆိုက်ရောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်လက်ခံရရှိမည်ဟိုတယ်ကိုမှခေါ်ထုတ်။ ဟိုတယ်တွင် check-in အနည်းငယ်သာအနားယူပြီးတဲ့နောက်ကျနော်တို့ Anthropological ပြတိုက်ကနေထို့နောက်ကိရိယာများ, မော်ဒယ်နေရင်းဒေသများ, အနုပညာနှင့်ကပ္ပလီ & လီကြှနျး၏ဘော်ရီဂျင်နီအမြိုးအနှယျ handcrafts ဖော်ပြပေးထားတဲ့ Anthropological ပြတိုက်နှင့်အပန်းဖြေစတင်ပါလိမ့်မည်, ငါတို့ Corbyn ရဲ့ Cove မှဆက်လက်ဆောင်ရွက် ကမ်းခြေ။ ဆယ်လူလာထောင်မှာအလင်း & အသံပြရန်: ညနပေိုငျးတှငျကြှနျုပျတို့လွတ်လပ်ခွင့်တိုက်ပွဲစစ်ကိုင်းအသက်ရှင်လျက်ယူဆောင်သည်အဘယ်မှာရှိဆယ်လူလာထောင်မှာအလင်းနှင့်အသံပြရန်အဘို့အရွှေ့ပါ။
ယနေ့နံနက်စာပြီးနောက်ကျွန်တော်ရော့စ်ကျွန်းမြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် (Coral Island သို့) နှင့် Viper ကျွန်း (ဆိပ်ကမ်း Cruise) ဆီသို့ဦးတည်ပီတိအပြည့်အဝနေ့အဘို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ ရော့စ်ကျွန်း: ပထမဦးစွာကျွန်တော်ရော့စ်ကျွန်းကိုဗြိတိသျှအစိုးရအုပ်ချုပ်ချိန်အတွင်းဆိပ်ကမ်း Blair ၏ erstwhile မြို့တော်မှ (လှေဖြင့်) ကိုရတာဟာခရီးစတင်ပါကယခုနီးပါးအပျက်အစီးများအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူတစ်ဦးခံ့ညားရှေးဟောင်းပစ္စည်းကိုဆိုလိုတာပါ။ တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ပြတိုက်ဓာတ်ပုံတွေနှင့်ဤကျွန်းများမှသက်ဆိုင်ရာဗြိတိသျှ၏အခြားရှေးဟောင်းပစ္စည်း, ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်အမေရိကဂလားပင်လယ်အော် (Coral Island သို့): ရော့စ်ကျွန်းကနေကျနော်တို့ထူးခြားဆန်းပြားသန္တာ, ရောင်စုံငါးများနှင့်ရေအောက်ပင်လယ်ဘဝရာပူဇော်သက္ကာကိုမြောက်ကိုရီးယားဂလားပင်လယ်အော်ကျွန်း (Coral Island သို့) တစ်ဦးလည်းရွှင်လန်းခရီးစဉ်များအတွက်ရှေ့ဆက်။ ကျနော်တို့ဖန်အောက်ခြေလှေနှင့် snorkeling (optional) အတွက်မှတဆင့်ဤအရောင်စုံသန္တာ & ရေအောက်အဏ္ဏဝါဘဝကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဆိပ်ကမ်း Cruise နဲ့ (Viper ကျွန်း): နေ့လည်ကျနော်တို့ Viper ကျွန်းမှတစ်ဦးခရီးစဉ်တွင်သေဒဏ်စီရင်ရာအရပ်အပါအဝင်သင်္ဘောကျင်းစသည်တို့ရေပေါ်, ဆိပ်ကမ်းတစ်ခရုဇ်အဘို့အပင်လယ်ဆိုလိုသည်မှာဆိပ်ကမ်းကနေခုနစျပါးမှတ်များ၏မြင်ကွင်းကျယ်ရှုထောဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
နေ့ 03: Port Blair - HAVELOCK ကျွန်း
ယနေ့ကြှနျုပျတို့ Port Blair ဆိပ်ကမ်းကနေကူးတို့ကနေတဆင့် Havelock ကျွန်းဆီသို့ဦးတည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးကိုစတင်ပါ။ Havelock ကျွန်းမှာဆိုက်ရောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်စစ်ဆေး-In ဖို့အပန်းဖြေရန်သင့်အားလက်ခံရရှိပြီးခေါ်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ Havelock ကျွန်းမှာ optional အပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများ: ဆင်သဲသောင်ပြင်မှ Snorkeling ခရီးစဉ်: လူတစ်ဦးလျှင် Rs.750.00 (ပုဂ္ဂလိကလှေ, လမ်းညွှန် & Snorkeling ပစ္စည်းလည်းပါဝင်သည်)
နေ့ 04: HAVELOCK ISLAND- Port Blair
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်ကျနော်တို့ Radhanagar သဲသောင်ပြင် (သဲသောင်ပြင်အမှတ် 7) အားဆက်လက်ဆောင်ရွက်, အ Times သတင်းစာမဂ္ဂဇင်းအာရှမှာအကောင်းဆုံးကမ်းခြေတို့တွင်အကောင်းဆုံးသောကမ်းခြေသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာရေကူး, ပင်လယ်ရေချိုးနှင့်နေရောင်-နမ်းကမ်းခြေမှာပျော်ရွှင်များအတွက်စံပြနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မွန်းတည့်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ပြန် Port Blair (ကူးတို့ကနေတဆင့်) နှင့် Port Blair မှာညအိပ်ဆီသို့ဦးတည်ရှေ့ဆက်။
နေ့ 05: Port Blair - CITY ရှုခင်းများကြည့်ခြင်း - စျေးဝယ်
နံနက်စာပြီးနောက်ကျနော်တို့ဆယ်လူလာထောင် (အမျိုးသားသတိရအောက်မေ့) ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ Port Blair မြို့၏ခရီးစဉ်သည်သင်ကို ယူ. , Chatham (အာရှမှာရှိတဲ့ရှေးအကျဆုံးနှင့်အကြီးမားဆုံးကြိတ်) ကြိတ်မြင်လျှင်, သစ်တောပြတိုက်, Samundrika (ရေတပ်ရေကြောင်းပြတိုက်), သိပ္ပံစင်တာ, ဂန္ဒီပန်းခြံ , Marina ပန်းခြံ, ကပ္ပလီရေအားကစား Complex ။ စျေးဝယ်: ညဦးယံအချိန်မှာကျနော်တို့စျေးဝယ်များအတွက် Sagarika (။ Handcraft ၏အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များလေလံပွဲ) နှင့်ပြည်တွင်းစျေးကွက်မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
နေ့ 06: ကပ္ပလီကျွန်းစုထံမှထွက်သွား